Toddobo arrimood oo laga bartay dardaarankii Cusaama Bin Laden - Bulsho News
Saraakiil ka tirsan NISA oo laga celiyay inay ka dhoofaan...
Ikraan Tahliil: Ka hadalka kiiskeeda oo dib u soo cusboonaaday
Mareykanka ayaa sanadkii 2016 soo saaray dokumentiyadii labaad ee laga helay gurigii uu ku noolaa Osama Bin Laden ee ku yaallay Pakistan kadib weerarkii lagu dilay ninkaas.
Waxaa lasoo saaray 115 dokumenityo oo ay ku jiraan dardaarankii hogaamiyihii Al Qaacida.
Halkan waxaa idiin kuugu soo gudbineynaa waxyaabihii laga bartay arrintaas.
1 ‘Raac dardaarankeyga’
Osama Bin Laden wuxuu ka tegay dhaqaale gaaraya $29 malyan oo doolar.
Inta uusan geeriyoon, wuxuu qoyskiisa ugu baaqay ‘inay raacaan dardaarankiisa’ oo aysan dhaxlin dhaqaalihiisa isla markaana ay ku bixiyaan “Jihaadka” ama Alle dartii.’
Wuxuu soo hadal qaaday hanti ka taallay Suudaan balse ma kala cadda waxa ay tahay hantidaas.
Bin Laden wuxuu Suudaan ku noolaa muddo shano sano ah sagaashamaadkii xilli uu casuumaad ka helay dowladdii Suudaan.
Wuxuu sidoo kale amar ku bixiyay in lacagaha qaar la siiyo labo qof iyo dad kamid ah qaraabadiisa.
2. Wuxuu u maleeyay in xaaskiisa la dabagalayo
Waxyaabaha uu ka cabsi qabay Osama in dabagal lagu sameeyo, waana waxyaabaha ku xusan qoraalladiisa la helay.
Warqad uu u qoray mid kamid ah xaasaskiisa oo ku nooleyd Iran oo gooska laga bixinayay, wuxuu cabsi ka muujiyay in dhakhtarkii gooska u buuxinyay in uu ku xiro qalab dabagal ah si loo ogaado Osama.
Wuxuu faray in la burburiyo gooska, sida ku xusan warqadda.
Warqad waxay muujineysaa in Osama uu shaqaalihiisa ku amray inay tuuraan boorso lagu soo rido lacago, wuxuu rumeysnaa in lagu soo qariyay qalab taas oo fududeyn karto in diyaaradaha Drones-ka ay beegsadaan.
Wuxuu ka codsaday in lacagta lagu soo qaado baabuur.
3. Khilaafkii kala dhexeeyay kooxda isku magacaawday dowladda Islaamka
Dokumentiyo dhowr ah waxay muujinayaan in khilaaf uu kala dhexeeyay kooxda IS.
Bin Laden wuxuu kasoo horjeeday tallaabooyin ay dadka ku dilayaan iyo tacadiyadda ay gesytaan.
Dagaalyahan ka tirsan IS 2014
4. Dagaalka uu ugu jiray maamulidda ururkiisa
Dokumentiyada waxay sidoo kale muujinayaan in Osama uu awoodda saarayay maamulka deegaanada ay gacanta ku heysay Al Qaacida.
Warbixinta waxay sidoo kale qeexeysaa in uu isku dayay in uu sameeyo maamul gaar ah oo dhigaya, magaacibadda, ‘madaxa guddiyada’ oo ka kooban ‘saraakiisha iyo dadka la shaqeyn kara taliyaha militeriga’
Warqad loo diray garabka Al Qaacida ee Yemen waxaa lagula taliyay in “inay baahiyaan howlgalka ka dhan ah Mareykanka’ isla markaana ay ku tallaabsadaan isku dayo ay ku qarxi karaan diyaaradaha Mareykanka.
5. Wuxuu qorsheynayay in uu xuso weerarkii 9/11
Wuxuu ahaa sanadkii 2011, Bin Laden waxay u aheyd maalin weyn.
Ururkiisa wuxuu qorsheynayay in uu xuso 10 sano guuradii kasoo wareegtay weerarkii lagu qaaday Mareykanka ee 11 September 2001, wuxuu warbaahinta qaar ka codsaday inay baahiyaan munaasabadda.
Balse ma jirin wax war ah oo ku saabsan inuu qorsheynayay weerar kale.
Gurigii uu ku noolaa Osama Bin Laden ee ku yaallay Abbottabad Pakistan
Bin Laden wuxuu sidoo kale qorsheynayay in uu isaga baxo goobtii uu ku dhuumanayay oo ku taallay magaalada Abbottabad ee dalka Pakistan.
Si kastaba , waxaa la dilay inta uusan qaban xuska munaasabaddaas.
6. Jaamacadda Jihaadka
Waxaa dokumentiga ku xusnaa in casharo la siinayay dagaalyahanada cusub “Casharro diinta Islaamka ah oo loogu talagalay askarta iyo xubnaha ka tirsan ururka”
Casharka koowaad waxaa diiradda lagu saari doona qoraalka iyo akhrinta iyo sidoo kale barashada Qur’aanka.
Halka casharka saddexaad uu ahaa buug uu qoray nin mujaahid ahaa oo la oran jiray Abu Musab al-Zarqawi iyo casharro ku aadan dagaalkii Israa’iil iyo Afghanistan.
7. Xaasaskii ku sugnaa furrimaha dagaalka
Su’aasha ku saabsan in taliyaasha Al Qaacida ay xaasaskooda u ogolaadaan inay kasoo muuqdaan furriimaha hore ee dagaalka waa arrin ka dhex taagneyd gudaha ururka.
Mid kamid ah dokumentiyada ayaa muujinayay in garabka Al Qaacida ee Morocco uu cinwaan uga dhigay, “Xaasaska mujaahidiinta oo ku sugan goobaha dagaalka”
Waxaana taliyeyaasha la faray in xaasaskooda ay guryaha ku celiyaan.
Dokumentiga oo soo xiganayo ilo dhowr ah ayaa lagu sheegay, “in Jihaadka uusan waajib ku aheyn dumarka balse laga rabo haweenka da’da ah”
Biden oo amray in dib u eegis lagu...
Australia hits vaccine milestone as Melbourne cases hover...
Madaxweyne FARMAAJO oo laba guul oo siyaasadeed oo...
Liverpool Oo Ku Biirtay Baacsiga Loogu Jirto Saxiixa...
Maamulka Gobolka Bari oo Awaamiir adag soo saaray
U.S. border agents briefly detain 14 Mexican soldiers...